Uke cishe funda lukhulu mayelana Cyber-amaphekula futhi nje indlela ukulonda pc yakho, kodwa yisiphi isizathu, Abantu abaningi besaba ukuthi okuningi mayelana smartphone yokuphepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi akuyena njengenyoka bendabuko idrayivu kanzima oye sigcine yonke imibhalo akho, izithombe, imiqophi, njll, kodwa amakhasimende smartphone zibulawa ukuqina anamuhla ukugcina anele ukwaziswa okuningiliziwe online lokho ngempela ezizwelayo yiziphi abanye, like Cyber-amaphekula, bekungaba ngenjabulo ukujabulela ukuthatha ngenkathi ubhekene surf inetha at cafe Local.
Ngenhlanhla, smartphone security is ekufinyeleleni traction futhi uzothola eziningi izinyathelo ongazithatha ukusiza bayeke smartphone yakho ukuba sengozini. Ngempela, eziningi izinyathelo ezifanayo uthatha ukuze sivikele pc yakho ingase isetshenziselwe qapha smartphone yakho futhi. Kulabo yonke amasu akho yokuthola smartphone yakho, usitshele ngaphakathi ukuphawula.
1. Sebenzisa Passcodes Nomaphi
Kungakhathaliseki ukuthi ifa i phone Android noma mhlawumbe i-iPhone apple, ukwazi ukuvimbela ukusetshenziswa idivayisi yakho ne ukwengeza iphasikhodi noma mhlawumbe iphethini lock on Android. Nokuvikeleka Le isilinganiso eqondile kungaba ukuvikela imininingwane ebucayi kusuka ukubonwa abanye. Lokhu kubaluleke kakhulu kulabo Ziningi izicelo ezifakiwe lapho idatha yangasese igcinwa like izicelo zezimali (Than, Izicelo asebhange, njll), iphephabhuku izicelo (DayOne), Izicelo inothi (Evernote), njll. On ezimbalwa zalezi izicelo njengo Mint and DayOne, ungakwazi ihlanganise iphasikhodi ikakhulukazi kwesicelo sakho, ukuthi sihlale sikwenze Ngaphezu kwalokho ekwenzeni iphasikhodi ulonde kwisikrini indlu.
Iphasikhodi screen Indlu kubalulekile ngoba eziningi kwezicelo imeyili (Imeyili on apple iPhone and movie ne-Android) nakwazi eziza ukukhetha ukuze iphasikhodi imeyili yakho. Imeyili ingaqukatha eziningi idatha yomuntu siqu futhi ibuye, kusukela abantu abaningi vakashela amaqembu bahambe amafoni abo ematafuleni and tibali, kungcono super lula umuntu Snoop azungeze izinto zakho.
2. Londoloza ICLOUD Your & Akhawunti ye-Google
Isici 2nd abantu abaningi abaqapheli yilapho othile esingambona ukufika akhawunti yakho ICLOUD noma Google, bayakwazi ukufinyelela idatha eziningi okungenzeka wena ukudala ukuhlela aphume smartphone yakho. Ngesikhathi lezi zenzakalo, ke kuthiwa isiphazamiso ebalulekile ukuvumela 2-step kulandisa okubili. Ngiye esibhalwe sendlela ukulondoloza akhawunti yakho ye-Google futhi nje nendlela ngokunembile isethaphu ubuye ukuthola ukukhetha for 2-step verification.
Kuba pretty okungenangqondo, Nokho ID yakho Apple ngokuyinhloko elawula ukusetshenziswa nalowo msebenzi Apple ukuthi okwamanje uyatholakala iTunes kuya ICLOUD kuya Ubuso-isikhathi iMessage, njll, njll. Uma umuntu ukufinyelela ID yakho Apple, bayakwazi bachitha Apple wakho ukhona kufaka nokususa apula yakho iPhone, iPad and Mac ukude. Kuba cishe ncamashi inkinga efanayo nge Google. Akhawunti yakho yakwa-Google ngokuyisisekelo ufake kulo lonke amasevisi e-Google kusuka ku-Gmail ku-YouTube Google Play ku-Google Maps ye-Google Calendar ukuze Picasa ku-Google , njll, njll, njll.
3. Gwema Jailbreaking noma ukhula lwenkohlakalo egcwele smartphone yakho
Ingabe kufanele ukuthola ukuthi wenzani nani futhi jailbreak noma izimpande kwefoni yakho nje sizijabulise futhi ubumnandi, ke enempilo ngawe. Uma ufisa zokwenza lokho njengoba Ufunde ngayo ezindabeni futhi ufisa ukuba babe "mahhala" ezivela izingqinamba kanye nemikhawulo, ke udinga angasondeli nokusondela inqubo ngokuphelele. Okokuqala, kungase isikulufa ifoni yakho bese Chile in nosizi kuka injabulo. Next, ngeke babe ikhono ngcono Ifoni yakho ngokusebenzisa i-updates zakamuva ekwenzeni OS njengoba uzoba alondoloze i imodi engasekelwe.
Yebo, ukwazi ukufaka ezinye izicelo kanye nokwenza ukucupha ungase ngenye indlela kungabi akwenze, Kodwa lokho kusho ubhekene godu ukufaka izicelo ezingaholela iphathe ubungozi. Unayo le nkinga on Android nokuba ukuthi mancane limited njengoba Apple ngalokho usebenzisa esitolo lesicelo. Yikuphi kuphakamisa iphuzu elandelayo.
4. Qaphela Ukusebenzisa zokusebenza Put In
Loku kubaluleke kakhulukati on imikhiqizo Android. Google muva nje isuswe 50,000 Izicelo okuyinto esolwa ukuba abe adware and spyware. Ngeke kube khona noma yimuphi ukungabi kwezicelo aqukethe adware and spyware, izifo noma yimuphi omunye isofthiwe sneaky ukuntshontsha idatha kwikhompyutha yakho noma kulimaze Ifoni yakho. I-Apple application esitolo inikeza lolu daba, kodwa elithile elincane okuningi. Apple Odokotela bezilwane esicelo ngasinye ngaphambi kwalo ukudla enezikhombo ngu esitolo njalo uya mayelana ukususa izicelo ku esitolo zazo kubhekwe ukuba babe breaking esitolo iziqondiso.
Funda lesi sihloko sidingida indlela ukuthi kuningi kuka 32 million imikhiqizo Android abangu ziye izinkontileka adware kanye spyware kulo nyaka futhi nje kanjani 95% of adware kanye spyware kuyinto latsite maqondana imikhiqizo Android. Akuve amahle okufanele uzonde Apple, kodwa iqiniso kuyinto uma udinga Android idivayisi, kudingeka siqaphele ukufaka izicelo. Bheka singene nokubuyekezwa, ukunquma uma une ingosi inthanethi, enze search in the yelucwaningo asebentisa sihloko lesicelo, njll.
5. Sebenzisa isicelo Kunokuba isiphequluli
Uma wenza Banking efonini noma isitokwe yakho nokudayisa noma nezinye izinto lidlula nezindaba ezibucayi ezihilela ifoni bese ibuye Internet, kungcono ukusebenzisa isicelo esemthethweni ye site yakho noma inkampani esikhundleni wokuvula ngenkathi usebenzisa isiphequluli efonini yakho.
Ngokwesibonelo, UChase, Bank of the USA, Vanguard, ScottTrade, Than, futhi eziningi nezinye izikhungo ezinkulu Banking izicelo zabo siqu kakhulu iOS and Android. Imigudu ephephile kusekelwa kuyi-smartphone nako, kepha wena kuyoba kancane ephephile uma ufika isicelo esemthethweni ongaba izinyathelo zokuvikeleka engeziwe.
6. Control Ungakanani an Isicelo ukuthola
Uke cishe ngabona umyalezo olandelayo ngo apula yakho iPhone 100 izikhathi kakade:
Uzothola ezihlukahlukene lezi "APPNAME ufuna ukuthola imininingwane Wakho" imiyalezo. Idatha ngiko izithombe, indawo, othintana, njll, njll. Njalo bayiqaphele out on kwenye bamane uchofoze OK njalo. Ingabe kufanele lutho uchofoze bahlale, kulula ukuba nje ukukhetha Musa Vumela futhi uma ungakwazi ukusebenzisa isicelo kwalokhu, ukwazi ngesandla ungene futhi ukushintsha lona akuvumele ukufinyelela. Eziningi zalezi Ingabe izinto ezidinga kakhulu futhi akavumi ukuba kulimaze, kodwa kusuke ephephile kangcono.
On Android, ingama-godu sibi kakhulu ngoba ezinye izicelo uzocela for Imigomo konke naphezu kokuba ukuthi kuvamise ngeke ayidingayo. Funda lokhu Lifehacker ishicilele mayelana nendlela Zivikele kusuka izicelo Android ukuthi acele eningi izimvume. Uzothola izimvume ubuye okuningi kakhulu kwi Android kuka uyothola on iOS, wena kanjalo aphinde kudingeka ngokucophelela uma i umsebenzisi Android.
7. Gcina Idatha asekelwe
Akukhona kuphela smart ukugcina smartphone usekelwa nje uma uphonsa it ngaphakathi ethoyilethi, kodwa ngaphezu kwalokho kungaba ukudla ezebiwe futhi uthola ukuba bakude Sula ihlanzekile. Amakhasimende Apple kungaba ufake Find My apula iPhone application, okuyinto eyenza wena ukuba bakude ukukhiya ucingo bese ukude Sula it azi ukuthi yebiwe.
Kufanele yini ube idatha kwikhompyutha yakho asekelwa, uzolahlekelwa konke uma yebiwa. Kufanele yini abasisekelayo endaweni yangakini noma mhlawumbe efwini, uzoba nekhono Sula kwefoni yakho bese uthole yonke idatha yakho emuva efonini yakho entsha. Ungase anama uvumelanise smartphone yakho kukhompyutha yakho ngokusebenzisa i iTunes noma abasisekelayo ekwenzeni ifu nge ICLOUD.
On Android, kukhona esakhelwe Ithuluzi yokusekelayo, Nokho lokho kuyobe konke yokusekelayo efonini yakho efana the iOS ababheka. Kunalokho, uzoba kudingeka sithembele nezicelo ezivela eceleni ngaphakathi Google Play esitolo ukuze isipele sefoni yakho ngokuphelele. Uqaphele ukuthi Android unikeza i-inthanethi Sula isimo, kodwa wena kufanele isethaphu kuqala ngokubeka up izicelo ezithile.
8. Bika Hambayo Your ebiwe
Ngaphakathi mbhangqwana yokugcina amasonto, kunesizathu a eyebiwe phone database kukhiqizwa ukuthi eyabiwe emkhatsini wireless abahlinzeka zakho ezinkulu. Ukwazi ukubika Ifoni yakho ezebiwe ezingase ukuvimbela muntu kusuka wokuxhumana ekufezeni inkampani futhi sibambe idatha noma imizuzu. Lapho izama Sula it, ushintshe i-SIM, njll, namanje ngeke avumele ukuba kusebenze kwi abahlinzeki ngenxa inombolo ye-serial. Ungakwazi aye amakhasi elilandelayo ukubika smartphone yakho yebiwa bese ukuyeka kwengobe kusuka wokuxhumana kuya enkampanini wireless:
9. Vuselela i-OS
Ncamashi like kudingeka bahlale ifake Microsoft nokuvikeleka for the PC, kungcono smart ukufaka updates yakamuva ye-smartphone. Okwazi ukulinda izinsukwana bese wenze ezithile uyothola akukho ubunzima enkulu nge-update ofana nokwehliswa kwesithunzi battery ukhona, njll, kodwa lapho lutho silandela imithetho out, ke ukubuyekeza ucingo.
Ngaphezu kwalokho ukuba ngcono OS, futhi sihlakaniphe ukubuyekeza izicelo ezibekwe efonini yakho. Kuyamangalisa inani Pop Ngisanda uhlangane lapho uyothola 10, 20, 30 izicelo yimuphi babe updates yimuphi none kwenzeke ukuba efakiwe. Abantu ngabanye updates zingahlanganisa izici ezengeziwe, kodwa eziningi ongakhetha kukhona bug fixes, kusebenta izimvuselelo nokuvikeleka fixes.
Uma ekhaya, kungcono ukuzama futhi uvimbele wireless bese Bluetooth ngokuphelele futhi baqashe isizukulwane sakho 3rd noma 4G uxhumano uma uyakwazi. Ngokushesha nje lapho ubona ukuxhuma kunethiwekhi wireless untrusted, ungumuntu litholakale Cyber-amaphekula eliphakeme yisifo ngaphakathi inethiwekhi. Ngisho nalapho ubhekene hhayi elinemininingwane yasebhange noma ekwenzeni olunye into okubandakanya idatha ebucayi, a hacker liqhubeke zama ukuhlangana ne smartphone yakho ebe idatha, njll.
Uma lokhu kuhilela Bluetooth, nokugenca mancane njalo, kodwa ekufinyeleleni ukuqashelwa njengoba abantu baqale ukusebenzisa ubuchwepheshe more phambili nje headphones. Manje kufanele amawashi exhumene efonini yakho nge-Bluetooth bese imfanelo bands kanye eziningi kwamanye amadivaysi. Uma Bluetooth inikwe amandla futhi ibonwe, it Cyber-amaphekula ukunika ithuba okungafani kungenzeka baqale ukubona idatha kokuba kudlule emkhatsini wakho ithuluzi bluetooth kanye nefoni yakho.
Sethemba la iziqondiso bangakusiza ngaphakathi simo esidabukisayo lapho Ifoni kini eyebiwe noma ilahleke. Ngiye okudingekayo mathupha ukuqothula i iPhone apula kusukela i lehla khona base waqaphela othile kwaba ngenkathi usebenzisa i izicelo kanye uxhumano ulwazi. Ngokuqinisekile ngeke kwenzeke futhi, ngisho nalapho Ifoni wami eyebiwe noma ilahleke ngenxa ngiye kuqinisekiswe ukuthi njengoba ezivikelwe ngangokunokwenzeka. Kulabo wonke amanye amasu abanalo yokuthola smartphone yakho, usitshele ngaphakathi ukuphawula. Jabulela!
Posted on November 17, 2013 Januwari 25, 2014 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi Ukuphepha, Smartphone
Langaphambilini post Previous: Nendlela Phinda iMessages Deleted on iPhone / iPad / iPod
Next post Next: Top 5 Picture ukuhlela Apps for iPhone